Sonian’ny PM : Nahazoana Touareg iray -
AccueilRaharaham-pirenenaSonian’ny PM : Nahazoana Touareg iray
28/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tao anatin’ny taona maro, nampiasana ny fitombokase hosoka misy ny anaran’ny praiminisitra no nahazoan’ny lehilahy iray fiara “touareg”. Tamin’ity taona 2017 ity vao tra-tehaka ny tenany. Tazomina ao amin’ny toby Ratsimandrava nanomboka omaly io fiara io. Nanomboka ny taona 2016 no nipetraka ny fitoriana izay nataon’ny minisiteran’ny Fitsinjaram-pahefana tamin’izany, tamin’ny fahenoana fa misy olona manao hosoka ary mampiasa ny fitombokasen’izy ireo mirenireny any ho any. Nandeha ny fanadihadiana sy ny fikarohana, ary napetraka ihany koa ny vela-pandrika rehetra mba hahafahana misambotra ity olon-dratsy ity. Fanaovana pasipaoro sy fanamarinam-ponenana hosoka no ataon’ity lehilahy manodidina ny efapolo taona ity ho asa fivelomana. Ny alakamisy 23 Febroary lasa teo , tokony ho tamin’ny 04 ora hariva no tratran’ny zandary avy ao amin’ny DPJ (Direction de police judiciaire), teny amin’ny La city Ivandry niaraka tamin’io fiara io, ity mpanao hosoka ity , rehefa nahazoan’izy ireo vaovao dieny mialoha. Nentina teny amin’ny toby Ratsimandrava avy hatrany ity farany natao fanadihadiana. Niditra tamin’ny fisavana ny tranony teny Ambohimiandra ihany koa ireo zandary taorian’izay.
Ankoatra ny fananana an’ity fiara 4×4 touareg ity dia nahitana basy PA iray niaraka tamin’ny bala miisa efatra ihany koa tao an-tranony. Tra-tehaka niaraka tamin’ireo ny antontan-taratasy sy ny pasipaoro hosoka maromaro. Ankoatra izay, sarona tao ihany koa ny fanamarinam-ponenana hosoka, amin’ny modely teo aloha izay miisa 22 , sy fanamarinam-ponenana “biometrique” miisa 28. Tsara ny manamarika, fa ny teratany vahiny no nataon-dranamana lasibatra tamin’ity resaka hosoka ity, ary ny 75 isan-jaton’izy ireo dia ana teratany sinoa avokoa. Nandritra ny famotorana natao azy no nanondroany ny namany mpiray tsikombakomba taminy amin’ny fanamboarana ireo taratasy hosoka ireo, izay mipetraka eny Ambodifasina -Ivato. Tao amin’io toerana voalaza io ihany koa no nahatratrarana ireo fitaovana rehetra toa ny solosaina sy ireo fitombokasem-panjakana, izay nahitana ny fitombokasen’ny praiminisitra, nampiasain’izy ireo tamin’ny fanatanterahana ity asa ratsy ity. Niaiky ny heloka vitany izy, ary tamin’izany no nilazany fa vehivavy daholo no mpiray petsapetsa aminy. Mpiasa ao amin’ny minisiteran’ny Atitany, izay hany tokana manana ireo fitaovana nampiasaina ireo ihany koa no mpamatsy azy ireo, ary isan’ireo mpiray tsikombakomba tamin’ity raharaha ity, araka ny nambaran’ity lehilahy ity hatrany. Mitohy ny fanadihadiana ary mbola mandeha ihany koa ny fikarohana ireo namany ireo. Atolotra ny fampanoavana anio talata ity raharaha ity.